သရုပ်ဆောင်ပီပြင်မှုတွေ၊ မိတ်ကပ်တွေကြောင့် မမှတ်မိလောက်အောင်ဖြစ်သွားတဲ့သရုပ်ဆောင်
Home Celebrity သရုပ်ဆောင်ပီပြင်မှုတွေ၊ မိတ်ကပ်တွေရယ်ကြောင့် မမှတ်မိလောက်အောင်ပြောင်လဲသွားတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေ
ဟောလီဝုဒ်ဇာတ်ကားတွေထဲမှာတော့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေဟာ ကျွန်တော့တို့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာသာရင်းနှီးနေပေမဲ့ အပြင်က သူတို့ရဲ့ သရုပ်အမှန်ကိုတော့ သိတဲ့သူရှားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ မိတ်ကပ်အပြင်အဆင်နဲ့ အဆင်တန်ဆာတွေ ဖုံးအုပ်ထားတာရယ်၊ သရုပ်ဆောင်ပီပြင်မှုတွေရယ်ကြောင့် သူတို့ကိုရဲ့ သရုပ်အမှန်ကို ဘယ်သူမှ မှတ်မိလောက်မယ်မထင်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ရုပ်ရှင်ထဲက ဇာတ်ကောင်နဲ့ အပြင်က သူတို့ရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်တွေ ဘယ်လိုကွာခြားသွားလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်တယ်နော်။
Guardians of the Galaxy ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ Nebula အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာ Karen Gillan ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Karen Gillan ဟာ လူကြမ်းအခန်းကဏ္ဍန်မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဇာတ်ကောင်အရ သူမရဲ့ ဦးခေါင်းကို ကတုံး တုံးခဲ့ရပါတယ်။ ကတုံးအပြင် မိတ်ကပ်တွေ၊ ကွန်ပျူတာရဲ့ ဖန်တီးမှုတွေကြောင့် သူမရဲ့ အပြင်သရုပ်အမှန်ကို ဘယ်သူမှ မမှတ်မိလောက်ပါဘူး။
X-Men ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာ Mystique ဇာတ်ကောင်အဖြင့် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာ Rebecca Romijn မင်းသမီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မော်ဒယ်တစ်ယောက်လဲဖြစ်သလို ဟောလီဝုဒ်မင်းသမီးတစ်ဦးလဲဖြစ်ပါတယ်။ ထို X-Men ဇာတ်ကားထဲမှာ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ၆၀% လောက်ကို မိတ်ကပ်နဲ့ ဖုံးလွှမ်းခဲ့တာကြောင့် သူမရဲ့ပင်ကိုယ်ရုပ်တောင် လုံးဝမပေါ်လွင်တော့ပါဘူး။ ထိုဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ဖို့အတွက် မိတ်ကပ်လိမ်းချယ်တာ အချိန် ၉နာရီထိလောက်ယူခဲ့ရတယ်လို့လဲ ဆိုပါတယ်။
Valerian and the City ofaThousand Planets ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ Emperor Haban Limai ဇာတ်ကောင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာAymeline Valade မင်းသမီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ပြင်သစ်မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ဟာ ခေတ်မှီဆန်းပြားတဲ့ အသွင်ပုံစံရှိတာကြောင့် ထိုဇာတ်ကားရဲ့ ဇာတ်ကောင်ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ မမှတ်မိလောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Pirates of the Caribbean ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာ Tia Dalma ဇာတ်ကောင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာ Naomie Harris ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Pirates of the Caribbean ဇာတ်ကားဟာ ပင်လယ်ဓားပြဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပြီး ထိုကားထဲမှာ သူမရဲ့ ပုံစံဟာ စုန်းကဝေတစ်ယောက်ပုံစံအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ သရုပ်ဆောင်ပြီပြင်မှုတွေကြောင့် အားလုံးက Namie Harris မင်းသမီးမှန်းမသိအောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
John Rhys-Davies ဟာ The Lord of the Rings ဇာတ်ကားထဲမှာ Gimli ဇာတ်ကောင်နေရာမှာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဇာတ်ကားထဲမှာ John Rhys-Davies ရဲ့ ပုံစံဟာ ရှည်လျားပြီး အုံထူတဲ့ မုတ်ဆိတ်မွှေးကြီးနဲ့ ပြီပြီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် ဇာတ်ကောင်ရဲ့ပုံစံကိုသာ ပရိတ်သတ်တွေ ရင်းနှီးခဲ့ကြပြီး အပြင်ပုံစံကိုကျတော့ သိပ့်မရင်းနှီးကျပါဘူး။
Cara Delevingne ဟာ Suicide Squad ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ Enchantress ဇာတ်ကောင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ Cara Delevingne ဟာ နာမည်ကြီး မော်ဒယ် မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Suicide Squad ဇာတ်ကားထဲမှာ မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်လို လူအများကို လိုက်လံ သတ်ဖြတ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ဇာတ်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ သူ မရဲ့ အသံတွေဟာ ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်အတွက် ပြီပြင်ခဲ့တာကြောင့် အပြင်ပုံစံတောင် မမှတ်မိလောက်
Ray Park ဟာ Star Wars ဇာတ်ကားရဲ့ ပထမပိုင်း The Phantom Menace မှာ Darth Maul ဇာတ်ကောင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အရိုးရှင်းဆုံးပြောရရင် ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ သူ့ရဲ့ ဇာတ်ကောင်အရ မျက်နှာကို ဆေးသုတ်ပြီး မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်ခဲ့တာကြောင့် Ray Park ရဲ့ ရုပ်ဟာ မမှတ်မိလောက်အောင် ပြောင်းလဲသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Sofia Boutella ဟာ Star Trek ရုပ်ရှင်ကားကြီးထဲမှာ Jaylah ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်နေရာမှာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Sofia Boutella ဟာပြင်သစ်မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ထိုဇာတ်ကားထဲမှာ သူမရဲ့ ပုံစံဟာ အဖြူရောင်ဆံပင်နဲ့ မျက်လုံးနဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ဆေးခြယ်လိမ်းထားတာကြောင့် သူမရဲ့ အပြင်ပုံစံ နဲ့ ဇာတ်ကောင်ပုံစံဟာ လုံးဝကွာခြားသွားပါတယ်။
Heath Ledger မင်းသားဟာ The Dark Knight ဇာတ်ကားမှာ Joker ဇာတ်ကောင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဇာတ်ကားထဲမှာ Heath Ledger ဟာ ဂျိုကာတစ်ကောင်ထက် ထူးခြားတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးရှိပြီး သူ့ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းအရ အပြင်ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ လုံးဝ ကွာဟသွားပါတယ်။
Warwick Davis ဟာ ဟယ်ရီပေါ်တာ ဇာတ်ကားထဲမှာ Griphook ဇာတ်ကောင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Warwick Davis ရဲ့ ပုံစံဟာ လုံးဝမှတ်မိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုဇာက်ကားထဲမှာ သူရဲ့ ပုံစံဟာ ရှည်လျားတဲ့ နှာခေါင်းနဲ့ နားရွက်တွေ၊ မျက်နှာအသွင်အပြင်တွေက အပြင်နဲ့ လုံးဝမတူအောင် မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်ထားတာကြောင့် ဘယ်လိုမှ မမှတ်မိလောက်ပါဘူး။
Michael J. Fox ဟာ Back to the Future ဇာတ်ကားရဲ့ အပိုင်း ၂မှာ Marlene Mcfly အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မမှတ်မိလောက်အောင် ထူခြားသွားတာက ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ ထိုဇာတ်ကားထဲမှာ အရမ်းကြင်နာတတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ပုံစံအဖြစ် ဇာတ်ကောင်သွင်းတာတာကြောင့် လုံးဝမမှတ်မိလောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
Charlize Theron မင်းသမီးဟာ Mad Max: Fury Road ဇာတ်ကားကြီးထဲမှာ Imperator Furiosa အဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ အပြင်မှာ ချောမောလှပသလောက် ထိုဇာတ်ကားထဲမှာတော့ ဇာတ်ကောင်ရဲ့ ပုံစံအရ ကတုံးဆံပင်ကေ၊ ဟောင်းနွမ်းပြီး ဖုန်တလောင်းလောင်းထနေတဲ့ အဝတ်အစားဒီဇိုင်းတွေ၊ လက်တစ်ဖက်မပါတဲ့ စုတ်တီးစုတ်ပြတ် ပုံစံတွေကြောင့် ဘယ်သူမှ မမှတ်မိလောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကလေးသရုပ်ဆောင် Jacob Tremblay ဟာ Wonder ဇာတ်ကားမှာ Collins Syndrome ရောဂါခံစားနေရသူ Auggie အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုကားထဲမှာ Auggie ရဲ့ ဇာတ်ကောင်သရုပ်ကို ပေါ်လွင်စေဖို့ Syndrome ရောဂါ ခံစားနေရာသူတွေနဲ့ အတူ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး သူတို့ရဲ့ အသွင်အပြင်တွေကို မိတ်ကပ်နဲ့ ၁နာရီခွဲခန့် ဖန်တီးယူရပါတယ်။ မိတ်ကပ်ဖန်တီးမှုတွေအပြင် သရုပ်ဆောင်မှု ကောင်းတဲ့အတွက် အပြင်ရုပ်ကိုတောင် မမှတ်မိလောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဟောလီဝုဒျဇာတျကားတှထေဲမှာတော့ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈတဲ့ ဇာတျကောငျတှဟော ကြှနျတော့တို့ ရုပျရှငျထဲမှာသာရငျးနှီးနပေမေဲ့ အပွငျက သူတို့ရဲ့ သရုပျအမှနျကိုတော့ သိတဲ့သူရှားပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ မိတျကပျအပွငျအဆငျနဲ့ အဆငျတနျဆာတှေ ဖုံးအုပျထားတာရယျ၊ သရုပျဆောငျပီပွငျမှုတှရေယျကွောငျ့ သူတို့ကိုရဲ့ သရုပျအမှနျကို ဘယျသူမှ မှတျမိလောကျမယျမထငျပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ ရုပျရှငျထဲက ဇာတျကောငျနဲ့ အပွငျက သူတို့ရဲ့ ပုံသဏ်ဍာနျတှေ ဘယျလိုကှာခွားသှားလဲဆိုတာ ဖျောပွပေးလိုကျတယျနျော။
၁။ Karen Gillan
Guardians of the Galaxy ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးမှာ Nebula အဖွဈ သရုပျဆောငျခဲ့တာ Karen Gillan ပဲဖွဈပါတယျ။ Karen Gillan ဟာ လူကွမျးအခနျးကဏ်ဍနျမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျရသူတဈဦးဖွဈပွီး ဇာတျကောငျအရ သူမရဲ့ ဦးခေါငျးကို ကတုံး တုံးခဲ့ရပါတယျ။ ကတုံးအပွငျ မိတျကပျတှေ၊ ကှနျပြူတာရဲ့ ဖနျတီးမှုတှကွေောငျ့ သူမရဲ့ အပွငျသရုပျအမှနျကို ဘယျသူမှ မမှတျမိလောကျပါဘူး။
၂။ Rebecca Romijn
X-Men ရုပျရှငျဇာတျကားထဲမှာ Mystique ဇာတျကောငျအဖွငျ့ သရုပျဆောငျခဲ့ရတာ Rebecca Romijn မငျးသမီးပဲဖွဈပါတယျ။ သူမဟာ ပရျောဖကျရှငျနယျမျောဒယျတဈယောကျလဲဖွဈသလို ဟောလီဝုဒျမငျးသမီးတဈဦးလဲဖွဈပါတယျ။ ထို X-Men ဇာတျကားထဲမှာ သူမရဲ့ ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံး ၆၀% လောကျကို မိတျကပျနဲ့ ဖုံးလှမျးခဲ့တာကွောငျ့ သူမရဲ့ပငျကိုယျရုပျတောငျ လုံးဝမပျေါလှငျတော့ပါဘူး။ ထိုဇာတျကားထဲက ဇာတျကောငျဖွဈဖို့အတှကျ မိတျကပျလိမျးခယျြတာ အခြိနျ ၉နာရီထိလောကျယူခဲ့ရတယျလို့လဲ ဆိုပါတယျ။
၃။ Aymeline Valade
Valerian and the City ofaThousand Planets ဆိုတဲ့ ရုပျရှငျကားထဲမှာ Emperor Haban Limai ဇာတျကောငျအဖွဈ သရုပျဆောငျခဲ့တာAymeline Valade မငျးသမီးပဲဖွဈပါတယျ။ သူမဟာ ပွငျသဈမျောဒယျတဈဦးဖွဈပွီး သူမရဲ့ ပုံသဏ်ဍာနျဟာ ခတျေမှီဆနျးပွားတဲ့ အသှငျပုံစံရှိတာကွောငျ့ ထိုဇာတျကားရဲ့ ဇာတျကောငျဖနျတီးတဲ့နရောမှာ မိတျကပျပွငျဆငျမှုတှနေဲ့ မမှတျမိလောကျအောငျဖွဈခဲ့ပါတယျ။
၄။ Naomie Harris
Pirates of the Caribbean ရုပျရှငျဇာတျကားထဲမှာ Tia Dalma ဇာတျကောငျအဖွဈ သရုပျဆောငျခဲ့တာ Naomie Harris ပဲဖွဈပါတယျ။ Pirates of the Caribbean ဇာတျကားဟာ ပငျလယျဓားပွဇာတျကားတဈကားဖွဈပွီး ထိုကားထဲမှာ သူမရဲ့ ပုံစံဟာ စုနျးကဝတေဈယောကျပုံစံအဖွဈသရုပျဆောငျရတာဖွဈပွီး သူမရဲ့ သရုပျဆောငျပွီပွငျမှုတှကွေောငျ့ အားလုံးက Namie Harris မငျးသမီးမှနျးမသိအောငျဖွဈခဲ့ပါတယျ။
၅။ John Rhys-Davies
John Rhys-Davies ဟာ The Lord of the Rings ဇာတျကားထဲမှာ Gimli ဇာတျကောငျနရောမှာ သရုပျဆောငျခဲ့သူပဲဖွဈပါတယျ။ ထိုဇာတျကားထဲမှာ John Rhys-Davies ရဲ့ ပုံစံဟာ ရှညျလြားပွီး အုံထူတဲ့ မုတျဆိတျမှေးကွီးနဲ့ ပွီပွီပွငျပွငျသရုပျဆောငျနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ ဇာတျကောငျရဲ့ပုံစံကိုသာ ပရိတျသတျတှေ ရငျးနှီးခဲ့ကွပွီး အပွငျပုံစံကိုကတြော့ သိပျ့မရငျးနှီးကပြါဘူး။
၆။ Cara Delevingne
Cara Delevingne ဟာ Suicide Squad ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးမှာ Enchantress ဇာတျကောငျအဖွဈ သရုပျဆောငျခဲ့သူပဲဖွဈပါတယျ။ Cara Delevingne ဟာ နာမညျကွီး မျောဒယျ မငျးသမီးတဈယောကျဖွဈပွီး Suicide Squad ဇာတျကားထဲမှာ မကောငျးဆိုးဝါးတဈကောငျလို လူအမြားကို လိုကျလံ သတျဖွတျသူတဈဦးဖွဈပွီး သူမရဲ့ဇာတျကောငျပုံသဏ်ဍာနျနဲ့ သူ မရဲ့ အသံတှဟော ဇာတျကောငျတဈယောကျအတှကျ ပွီပွငျခဲ့တာကွောငျ့ အပွငျပုံစံတောငျ မမှတျမိလောကျ
၇။ Ray Park
Ray Park ဟာ Star Wars ဇာတျကားရဲ့ ပထမပိုငျး The Phantom Menace မှာ Darth Maul ဇာတျကောငျအဖွဈ သရုပျဆောငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အရိုးရှငျးဆုံးပွောရရငျ ဒီဇာတျကားထဲမှာ သူ့ရဲ့ ဇာတျကောငျအရ မကျြနှာကို ဆေးသုတျပွီး မိတျကပျလိမျးခွယျခဲ့တာကွောငျ့ Ray Park ရဲ့ ရုပျဟာ မမှတျမိလောကျအောငျ ပွောငျးလဲသှားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
၈။ Sofia Boutella
Sofia Boutella ဟာ Star Trek ရုပျရှငျကားကွီးထဲမှာ Jaylah ဆိုတဲ့ ဇာတျကောငျနရောမှာ သရုပျဆောငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ Sofia Boutella ဟာပွငျသဈမငျးသမီးတဈယောကျဖွဈပွီး ထိုဇာတျကားထဲမှာ သူမရဲ့ ပုံစံဟာ အဖွူရောငျဆံပငျနဲ့ မကျြလုံးနဲ့ မကျြနှာပွငျပျေါမှာ ဆေးခွယျလိမျးထားတာကွောငျ့ သူမရဲ့ အပွငျပုံစံ နဲ့ ဇာတျကောငျပုံစံဟာ လုံးဝကှာခွားသှားပါတယျ။
၉။ Heath Ledger
Heath Ledger မငျးသားဟာ The Dark Knight ဇာတျကားမှာ Joker ဇာတျကောငျအဖွဈ သရုပျဆောငျခဲ့သူဖွဈပါတယျ။ ထိုဇာတျကားထဲမှာ Heath Ledger ဟာ ဂြိုကာတဈကောငျထကျ ထူးခွားတဲ့ ပုံသဏ်ဍာနျမြိုးရှိပွီး သူ့ရဲ့ သရုပျဆောငျမှုအပိုငျးအရ အပွငျပုံသဏ်ဍာနျနဲ့ လုံးဝ ကှာဟသှားပါတယျ။
၁၀။ Warwick Davis
Warwick Davis ဟာ ဟယျရီပျေါတာ ဇာတျကားထဲမှာ Griphook ဇာတျကောငျအဖွဈ သရုပျဆောငျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ Warwick Davis ရဲ့ ပုံစံဟာ လုံးဝမှတျမိမှာမဟုတျပါဘူး။ ထိုဇာကျကားထဲမှာ သူရဲ့ ပုံစံဟာ ရှညျလြားတဲ့ နှာခေါငျးနဲ့ နားရှကျတှေ၊ မကျြနှာအသှငျအပွငျတှကေ အပွငျနဲ့ လုံးဝမတူအောငျ မိတျကပျလိမျးခွယျထားတာကွောငျ့ ဘယျလိုမှ မမှတျမိလောကျပါဘူး။
၁၁။ Michael J. Fox
Michael J. Fox ဟာ Back to the Future ဇာတျကားရဲ့ အပိုငျး ၂မှာ Marlene Mcfly အဖွဈ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ မမှတျမိလောကျအောငျ ထူခွားသှားတာက ယောကျြားတဈယောကျဖွဈပမေဲ့ ထိုဇာတျကားထဲမှာ အရမျးကွငျနာတတျတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျရဲ့ ပုံစံအဖွဈ ဇာတျကောငျသှငျးတာတာကွောငျ့ လုံးဝမမှတျမိလောကျအောငျ ဖွဈခဲ့ရပါတယျ။
၁၂။ Charlize Theron
Charlize Theron မငျးသမီးဟာ Mad Max: Fury Road ဇာတျကားကွီးထဲမှာ Imperator Furiosa အဖွဈပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ။ အပွငျမှာ ခြောမောလှပသလောကျ ထိုဇာတျကားထဲမှာတော့ ဇာတျကောငျရဲ့ ပုံစံအရ ကတုံးဆံပငျကေ၊ ဟောငျးနှမျးပွီး ဖုနျတလောငျးလောငျးထနတေဲ့ အဝတျအစားဒီဇိုငျးတှေ၊ လကျတဈဖကျမပါတဲ့ စုတျတီးစုတျပွတျ ပုံစံတှကွေောငျ့ ဘယျသူမှ မမှတျမိလောကျအောငျ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
၁၃။ Jacob Tremblay
ကလေးသရုပျဆောငျ Jacob Tremblay ဟာ Wonder ဇာတျကားမှာ Collins Syndrome ရောဂါခံစားနရေသူ Auggie အဖွဈ သရုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။ ထိုကားထဲမှာ Auggie ရဲ့ ဇာတျကောငျသရုပျကို ပျေါလှငျစဖေို့ Syndrome ရောဂါ ခံစားနရောသူတှနေဲ့ အတူ သှားရောကျတှဆေုံ့ခဲ့ပွီး သူတို့ရဲ့ အသှငျအပွငျတှကေို မိတျကပျနဲ့ ၁နာရီခှဲခနျ့ ဖနျတီးယူရပါတယျ။ မိတျကပျဖနျတီးမှုတှအေပွငျ သရုပျဆောငျမှု ကောငျးတဲ့အတှကျ အပွငျရုပျကိုတောငျ မမှတျမိလောကျအောငျဖွဈခဲ့ပါတယျ။
Previous articleသားသားမီးမီးတှမှော အကငျြ့ဆိုးတှရှေိခဲ့ရငျ ပွငျပေးဖို့ သိကောငျးစရာမြား
Next articleသူကိုယျတိုငျဘှဲ့မရပမေယျ့ ခဈြသူကို ကောလိပျပို့ပေးနိုငျဖို့အတှကျ အင်ျဂလိပျစာလလေ့ာပွီး အလုပျကွိုးစားခဲ့တဲ့သူ
Celebrity February 18, 2019